.“သူမရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးကို မထင်မှတ်ထားပဲ တစ်ရက်တာအတွင်းမှာ Viewersသန်းချီထိ ရရှိသွားလို့ အံ့သြမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး”. – Askstyle
.“သူမရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးကို မထင်မှတ်ထားပဲ တစ်ရက်တာအတွင်းမှာ Viewersသန်းချီထိ ရရှိသွားလို့ အံ့သြမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး”.
ေကာ္ပတ္ရုပ္ေလးလို ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ အဆိုေတာ္သရုပ္ေဆာင္မေလး နန္းဆုရတီစိုးနဲ႕ ပရိသတ္ေတြကို အထူးတလည္ မိတ္ဆက္ေပးဖို႕မလိုေလာက္ဘူးထင္ပါတယ္။ နန္းဆုရတီစုိးကေတာ့ သရုပ္ေဆာင္ပိုင္းသာမက အဆိုပိုင္းမွာပါ ေအာင္ျမင္လာတဲ့အဆုိေတာ္တစ္လက္ပါပဲေနာ္။ သူမရဲ႕ထြက္ရွိသမွ် သီခ်င္းတိုင္းဟာဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့သီခ်င္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
လတ္တေလာမွာလည္း ေၾကာ္ျငာေလးေတြနဲ႕ သီခ်င္းေတြကို ရုိက္ကူးေနရတာေတြကို ေတြ႕ရမွာပါပဲေနာ္။ သူမရဲ႕သီခ်င္းအသစ္ရုိက္ကူးမႈေနာက္ကြယ္က ၾကိဳးစားခဲ့ရတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႕ ဗီဒီယုိဖိုင္ေလးေတြကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာေပၚမွာ တင္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ဒီေန႕မွာေတာ့ နန္းဆုရတီစုိးက” 2M Views yayyy”လို႕ဆုိျပီး မင္းရဲ႕အနား သီခ်င္းအသစ္ေလး တစ္ရက္အတြင္း viewers 2သန္းေက်ာ္သြားလို႕ ေပ်ာ္ရႊင္မဆုံးျဖစ္ေနတာေလးကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာေပၚမွာ တင္ေပးလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
နန္းဆုရတီစုိးရဲ႕ သီခ်င္းအသစ္ေလး တစ္ရက္တာအတြင္း viewersသန္းခ်ီသြားလုိ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မဆုံးျဖစ္ေနတာေလးကို ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္လည္ျပီးမွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ပရိသတ္ေတြအားလုံးသာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ေန႕ရက္ေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႕ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Source…..Nansu Yati Soe’s Facebook
ကော်ပတ်ရုပ်လေးလို ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်မလေး နန်းဆုရတီစိုးနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ နန်းဆုရတီစိုးကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းသာမက အဆိုပိုင်းမှာပါ အောင်မြင်လာတဲ့အဆိုတော်တစ်လက်ပါပဲနော်။ သူမရဲ့ထွက်ရှိသမျှ သီချင်းတိုင်းဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့သီချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာလည်း ကြော်ငြာလေးတွေနဲ့ သီချင်းတွေကို ရိုက်ကူးနေရတာတွေကို တွေ့ရမှာပါပဲနော်။ သူမရဲ့သီချင်းအသစ်ရိုက်ကူးမှုနောက်ကွယ်က ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ နန်းဆုရတီစိုးက” 2M Views yayyy”လို့ဆိုပြီး မင်းရဲ့အနား သီချင်းအသစ်လေး တစ်ရက်အတွင်း viewers 2သန်းကျော်သွားလို့ ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတာလေးကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ သီချင်းအသစ်လေး တစ်ရက်တာအတွင်း viewersသန်းချီသွားလို့ ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတာလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးသာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။